वीरगन्ज-सरकारले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेटमा प्रदेश २ मा केही आयोजना परे पनि अपेक्षा र आवश्यकता अनुसारको बजेट नपरेको गुनासो छ ।
बिहीबार संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटमा प्रदेश २ ले अपेक्षा गरेअनुसारको बजेट नआएको प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनले बताए । बजेट प्रस्तुत गर्नु एक दिनअघि प्रदेश नम्बर २ सरकारले कोरोना महामारीसँग लड्न र विदेशबाट फर्किएका युवालाई रोजगारको व्यवस्था गर्न विशेष आर्थिक प्याकेज नै उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँग माग गरेको थियो । विभिन्न मुलुकमा रोजगारीमा रहेका प्रदेशका २ का युवा स्वदेश फिर्ता हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशमा युवा रोजगार कार्यक्रम, कृषि केन्द्रित विशेष योजनाका लागि समेत विशेष आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउन माग गरेको तर, त्यो अपेक्षाअनुसारको बजेटले सम्बोधन नगरेको प्रदेश नम्बर २ का भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले बताए । उनले भने, “अपेक्षाअनुसारको बजेट आउने अपेक्षा गरेका थियौं । त्यो अनुसारको आउन सकेन । कोरोनामा विदेशिएका युवा फर्किने क्रमजारी छ । ३० लाख युवा बाहिरबाट फर्किएका छन् । उनीहरूमध्ये ७-८ लाख प्रदेश २ का युवा आउँदै छन् । उनीहरूका लागि कुनै प्याकेज आएन ।” ती युवाका लागि नेपालमै रोजगारको व्यवस्थासहितको बजेट आउने अपेक्षा गरेका थियौं । कृषिमा उच्चलगानी, सिँचाइमा आकर्षित बजेट, स्वरोजगार आकर्षित गर्नुपथ्र्यो त्यो बजेटमा सम्बोधन नभएको बताए ।
कोरोना महामारीमा अग्रभागमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेट आएन । पीपीईमा आयातमा भन्सार छुट दिने भनेर कर्मकाण्डी शब्द राखिएको छ । महामारीसँग लड्न सक्ने बजेट आएन, मन्त्री सोनलले भने । मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेको प्रदेश र स्वास्थ्य र सरसफाइमा पनि पछि परेको प्रदेश भएकैले विशेष आर्थिक प्याकेजको माग गरेको बताउँदै उनले प्रदेश २ मा अझै बर्सेनि आउने विभिन्न प्राकृतिक विपदको चुनौती रहेकाले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, “एक महिनापछि प्रदेश २ का जिल्लामा बाढी र डुबानको उच्चजोखिम छ । जाडोमा शीतलहरको उच्चजोखिममा हुन्छौं । अहिले कोरोनाको अतिउच्च जोखिममा रहेका छौं । यसलाई बजेटमा पारिएन ।
प्रदेशले गरिरहेका योजना, एक पालिकको केन्द्रदेखि अर्को पालिकासँग जोड्ने सडक निर्माण योजना पनि केन्द्रले गर्छौ भनिएको छ । त्यसमा पनि बजेट थोरै राखेको छ । नदी नियन्त्रणको सवालमा सिधै प्रदेशलाई बजेट दिनुपथ्र्यो, आठ जिल्लाका अस्पतालको र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि, कृषिमा आधारित सिँचाइलगायतका क्षेत्रलाई प्राथामिकता निर्धारण गर्न सकेन ।
बजेटमा विद्यावारिधि गरेका वीरगन्ज कलेज प्रालिका अध्यक्ष डा.दिपेन्द्रकुमार चौधरी प्रदेश नम्बर २ मा बजेट कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गर्छन् । जयनगर जनकपुर विजलपुरा रेल संचालन, बर्दिवासदेखि पश्चिमको रेलमार्ग निर्माणको अध्ययन, जनकपुर विमानस्थल, जानकी मन्दिर लगायतमा बजेटले सम्बोधन गरे पनि यसको संस्थागत क्षमता कमजोर देखिएकाले कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, “नेपाल सरकारको विगतको तेस्रो बजेट भाषण हो । एउटा कुरा के देखिएको छ भने बजेट सारमा राम्रो देखिन्छ । तर कार्यान्वयमा समस्या आउँछ ।” चालू आर्थिक वर्षको पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ । अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च २८ प्रतिशतमात्रै छ । ०७६-७७ को बजेटमै परेको नारायणी अस्पताललाई स्तरोन्नति बनाउने काम यो वर्षको अन्तिममा भर्खरै बोलपत्र आह्वान भएको छ । यो किन ढिलो ? उनले प्रश्न गरे । अहिले आएको बजेटमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य पूर्वाधार बनाउने भनिएको छ । यो अहिले आएको बजेटमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य पूर्वाधार बनाउने भनिएको छ । सराहनीय र स्वागयोग्य छ । तर, कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उनको निष्कर्ष छ । स्रोत बाँडफाडभएर आएको पाँच अर्बको बजेट ७५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्नेमा ६० प्रतिशतमात्रै खर्च भएकोले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले खर्च गर्न नसक्नु दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ छ । अहिले स्थानीय तहसँग जनशक्ति छैन ।
अहिलेसम्म नीति नियम बनाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन पनि प्रभावकारी लागू हुन नसकेको बताए । उनले भने, “प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा २ लाख युवालाई रोजगारी दिने भनिएको छ । नेपालको ७५३ स्थानीय तह र ६ हजार ७ सय ४३ वडा कार्यालयमा प्रत्येक स्थानीय तहमा २६५ र प्रतिवडा कार्यालय २९ जना भागमा पर्न जान्छ यसरी हेर्दा एउटा वडा कार्यालय २९ जनालाई रोजगारी दिँदैमा विकास हुन्छ भन्ने पक्षमा म छैन ।” उद्योग वाणिज्य संघ प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्ष हिरा साहलाई भने अहिलेको बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताए । उनले भने, “सबै कुरा अहिले नै भन्न अलि हतार नै हुन्छ । अध्ययन गर्न बाँकी नै छ । तर, समग्रमा आएको बजेट अहिले राम्रै छ ।”